Fil d'actualités du 18/09/2019
18/09/2019 - 16:00 : ANOSY:Miofana etsy amin’ny Plan Anosy miaraka amin’ny mpampiofana avy ao amin’ny « Autorité de Régulation des Marchés Publics » (ARMP) ireo mpisehatra amin’ny resaka tsenam-panjakana eto amin’ ny Tahirimbolam-panjakana nanomboka androany 18/09/2019.
18/09/2019 - 15:30 : TRANGA:Fiangonana Vahao ny oloka iray teny Ankaraobato no nakaton'ny fanjakana noho ny fitarainan'ny olona maro.
18/09/2019 - 15:00 : POLITIKA:Tonga nitsidika ny Filohan’ny Antenimierandoholona Rivo RAKOTOVAO ny solotenan’ny FAO miasa sy monina eto amintsika Andriamatoa Patrice Talla TAKOUKAM sy ny mpiara-miasa aminy.
18/09/2019 - 14:30 : FANATANJAHAN-TENA:Mitaky fifidianana hitantana ny federasiona ny taranja BOXE ny mpanazatra sy ny ligimparitra fa efa tapitra tamin'ny 2018 ny fotoampiasan'ny Federasiona mbola miasa ankehitriny.
18/09/2019 - 14:00 : FANATANJAHAN-TENA:Fantatra izao fa i Nicolas Dupuis no hiandraikitra ny toeran' ny Tale Tekinika nasionalin'ny federasiona Malagasy ny baolina kitra ary mbola izy ihany koa no hiandraikitra ny fitantanana ny ekipam-pirenena Malagasy.
18/09/2019 - 11:00 : MISS TOURISME MADAGASCAR 2019:Ny faha 19 Octobra no hanatanterahina ny dingana famaranana ny "Miss Tourisme Madagascar 2019" etsy amin'ny hotely Carlton Anosy,Miisa 15 ireo tovovavy hiatrika ny famaranana.
18/09/2019 - 10:30 : TSARA HO FANTATRA:Ny faha 25 Septambra ho avy izao no hankalazaina ny andro maneran-tany ho an'ny farmasianina izay ho tanterahina etsy amin'ny gara Soarano manomboka amin'ny 9 ora maraina.
18/09/2019 - 10:00 : KIDNAPPING:Anio no hiakatra fampanoavana ireo jiolahy tratra nanao kidnapping teny Ankadibe Ambihidratrimo izay voasambotra afak'omaly.
18/09/2019 - 09:30 : JIRAMA:Hisy fahatapahana ny JIRO anio Alarobia 18 septambra 2019, manomboka amin'ny 09 ora maraina ka hatramin'ny 04 ora tolakandro eny AMPANGABE ANOSIPATRANA;ary amin'ny 09 ora maraina ka hatramin'ny 05 ora hariva eny AMPEFY- FKT AMPEFY. Antony :Asa fanoloana andrin-jiro sy asa fikojakojana fanao isaky ny fotoana voafetra.
18/09/2019 - 09:00 : FANDAMINANA NY FIFAMOIVOIZANA:Anio no hijery izay kaoperativa manaraka ny fenitra eny Ambodivona ny ATT.
Archive du 20190319
Fotodrafitrasa vitaina ao Toamasina Mijapy lamasinina fotsiny Rajoelina…
Mikasika ny làlana migodana na “autoroute” Antananarivo-Toamasina, dia efa vitan'ny teo aloha ny fanadihadiana sy ny fikarohana làlam-bola.
Kandidan’ny TIM K25 –Boriborintany faha 4 Vonona hiaro sy hanampy ny vahoaka
Ramboasalama Emilien sy ny mpiray lisitra Hany kandidan’ny TIM ao amin’ny Boriboritany faha-4 Efa fantatra avokoa ankehitriny ireo kandida depiote natolotry ny antoko Tiako i Madagasikara (TIM)
Depiote tsy miankina tsy voafehy Hampalemy ny fitondrana, hoy ny ALDR
Hanitsy sy hametraka ny hasin’ny solombavambahoaka no antony hidiran’ny vondrona politika antoka sy lamina dieny izao ho an’ny raharahanao na ALDR ao anaty antenimieram-pirenena hoy ny mpikambana sady kandida ho solombavambahoaka ao Atsimondrano, Jean Ignace Randrianirina na Ramasy
Fiainam-pirenena sy politika Manana ny ambarany hatrany ny iraisam-pirenena
Tena manana izany atao hoe fiandrianam-pirenena izany marina ve i Madagasikara? Efa ho 59 taona no nahazoana fahaleovantena kanefa mbola maro amin’ny Malagasy no mihevitra sy mino tanteraka fa tsy mbola mahaleo tena izany fa i Frantsa sy ny fianakaviambe iraisam-pirenena no tompon’ireo fanapahan-kevitra lehibe raisina eto amin’ny firenena.
Kandidan’ny TIM K25 Manjakandriana Za-draharaha ary vonona ny handresy
Ny filohan’ny DisTim Manjakandriana, Randriamanga William Henri no voafidin’ny fototra Tim tao amin’ny distrikan’i Manjakandriana ho kandida solombavambahoaka avy amin’ny antoko Tiako I Madagasikara (TIM) hiatrika ny fifidianana solombavambahoaka ny 27 mey 2019 ho avy izao.
Vary mora Ketrika maloton’ny Pakistanais?
Fantatra izao, fa « brisure » ny 25% n’ilay vary mora nafaran’ny fitondram-panjakana izany hoe misy ampahefany potipotika vary nafarana avy any Karachi Pakistan, dia mitovy amin’ireo vary « stock tampon »
Manohy fianarana any ivelany I Kanada sy Etazonia no tena mahaliana ny mpianatra Malagasy
I Kanada miteny frantsay sy anglisy ary Etazonia no anisan’ny firenen-dehibe tena mahaliana ireo tanora mpianatra Malagasy maniry hanohy fianarana any ivelany amin’izao, raha araka ny fanadihadiana natao teo anivon’ny faneducation agency.
Faha-15 taonan’ny ABQ Rugby Lamesa eny Soavimbahoaka no hanokafana azy
Lamesa lehibe ho tontosaina eny amin’ny Chapelle eny Soavimbahoaka no hanokafana ofisialy ny fankalazana ny faha-15 taonan’ny fikambanan’ny mpanao rugby ABQ “Association du Bas Quartier” tarihan-dRazafiarison François
BAREA hihaona amin’i SENEGAL Efa any Dakar ny delegasiona niala teto Madagasikara
Efa tonga any Dakar Sénégal soamantsara omaly alatsinainy 18 martsa 2019 ny delegasiona Malagasy, niainga teny Ivato ny alahady 17 martsa teo, ahitana mpilalao 2 avy aty an-tanindrazana,
Fanampiana ny ekipam-pirenena Hanohana ara-bola mivantana ny “ALEFA BAREA”
Ankoatra ny lesoka eo amin’ny tsy fahampian’ny fanomanana sy ny lalao aram-pirahalahiana ataon’ny BAREA Madagasikara hiatrehana ny CAN 2019 (Coupe d’Afrique des Nations)
Rakoto Grena tany Ambohitranjavidy Moramanga Nahazo tso-drano tamin’ireo tangalamena sy oloben’ny tanàna
Tao anatin’ny asa soa efa fanaony an-taonany maro ka nizarany omby 1 sy vary fotsy ho an’ny zokiolona sy vahoaka sahirana tao amin’ny fokontanin’Ambohitranjavidy toerana fiaviany,
Vola ny fotoana, hoy ry zareo japoney izay. Izany toetsaina izany no naha resy lahatra azy ireo tsy handanindany fahatany io fotoana io fa hamadika ny fotoanany ho vokatra hatrany.
Fanafihana teny Andranonahoatra Itaosy Voatifitra ilay mpanao “versement”
Manomboka miaina anaty tsy fandriampahalemana tanteraka ny eny Itaosy sy ny manodidina amin’izao. Ankoatra ny hala-botry sy ny vaky trano mantsy dia efa tsy matahotra ny manafika amin’ny andro atoandro intsony ireo jiolahy.
Fitaovam-piadiana tsy ara-dalàna Basy mahery vaika 4 nisy nanatitra tany amin’ny zandary
Ati-pako! Tamin’ny zoma tapaky ny volana martsa teo no nisy nanao ati-pako ny basy kalaknikov roa, fa ny 2 hafa kosa mpitana ireny fitaovam-piadiana ireny efa nahazo alalana tany aloha no nanatitra izany teo amin’ny zandary,
Tsaratanana Mpaka takalon’aina 5 tamin’ny 60 no voatifitra
Dimy izay anisan’ireo heverina ho mpaka takalon’aina saika hanohitra sy handositra tamin’ireo mpivory enipolo mahery no lavo voatifitry ny zandary nandritra ny fifanjevoana.
Zandary iray indray no lavo am-perinasa. Tany Tsaratanàna raha nanara-dia dahalo no nisy tifitra tampoka avy ao anaty kizo nahazo ny zandary mpianatr’asa antsoina hoe Rakotomalala Dera Théogène, 25 taona ary mbola mpitovo.
VAOVAO TSY MITOMBINA
Asa na iza indray no manana tombontsoa sy maniraka olona hanaparitaka any anaty tambazotran-tserasera fesiboky amin’izao fotoana izao fa rononon’alika no hanamboarana ny ronono mandrimamin’ny orinasa Tiko ankehitriny.
La Réunion kely Tonga ny kaontenera andiany faharoa
Tonga tamin’ny faran’ny herinandro teo ny andiany faharoa tamin’ireo kaontera, trano vonjimaika hipetrahan’ireo olona sahirana monina etsy la réunion kely.
Ankizy tsy manana kopia ao Toamasina Mila jerena, hoy ny mpanakanto Nantenaina
Elaela no tsy nahenoana ny mpanakanto Nantenaina. Mitohy ny mozika, hoy izy, saingy izaho dia artista nisafidy ny ho balizin’ny fiarahamonina. Tsapako fa betsaka ireo ankizy tsy manana kopia sy sora-piankohonana ao Toamasina ary tsy misy mpijery.
Tsenan’ny Solomaso Andravoahangy Haharitra iray volana ny fanamboarana
Amboarina amin’izao fotoana ny tsenan’ny solomaso ao Andravoahangy ambany Boriborintany faha-3, Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA).
Jean Jacques Ratsietison “ Asa foronona fa aza tambatambazana ny Malagasy”
« Aza tambatambazana sy omena vary sy menaka ny Malagasy fa omeo asa izy hahavita tena ». Io no nambaran’ny filohan’ny fikambanana Fahefa-mividy no Ilain’ny Malagasy (FMI), Jean Jacques Ratsietison.
Centre Commercial International Hampiroborobo ireo orinasa madinika sy salantsalany
Tonga eto amintsika ny Tale mpanatanteraka eo anivon’ny“Centre Commercial International”, Rtoa Arancha Gonzalez.
Fitrandrahana harena ambanin’ny tany Vao ny 3 %-n’ny vola azo no miditra amin’ny fanjakana
Vao ny 3 %-n’ny vola azo avy amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany eto amintsika ihany no fantatra fa miditra anaty kitapom-bolam-panjakana hatramin’izao.